Isixeko saseNew York senza ugonyo lwe-COVID-19 kunyanzelekile kubo bonke ootitshala bezikolo zikarhulumente nabasebenzi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Education » Isixeko saseNew York senza ugonyo lwe-COVID-19 kunyanzelekile kubo bonke ootitshala bezikolo zikarhulumente nabasebenzi
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Education • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
USodolophu weSixeko saseNew York uBill de Blasio
Isigunyaziso sokugonya i-COVID-19 seNew York City silandela umgaqo-nkqubo ofanayo obekwe yiRhuluneli yaseNew York ephumayo u-Andrew Cuomo ngoJulayi, owabhengeza ukuba bonke abasebenzi bezempilo abaphambili kwizibhedlele ezilawulwa ngurhulumente kuyakufuneka bafumane i-jab ngoSuku lwaBasebenzi, ngaphandle kovavanyo kubonelelwe.
USodolophu weSixeko saseNew York uBill de Blasio ukhupha igunya lokuthintela bonke abasebenzi bezikolo zikarhulumente.
UDe Blasio uyalincoma igunya lokugonya njengendlela yokuqinisekisa ukuba izikolo “zikhuseleke ngokungaqhelekanga”.
I-Chancellor yeZikolo u-Meisha Ross Porter ubiza isigunyaziso sokugonya "olunye ukhuseleko" lwabantwana nabasebenzi.
Kwinkomfa yoonondaba namhlanje, uSodolophu weSixeko saseNew York uBill de Blasio ubhengeze utshintsho kumgaqo-nkqubo wakhe wangaphambili owawunika ootitshala, kunye nabanye abasebenzi esixekweni, ithuba lokugonywa okanye lokuvavanywa ngeveki, wathi iNYC yonke Ootitshala bakarhulumente kunye nabasebenzi bezakhono kuya kufuneka bafumane isitofu sokugonya se-COVID-19 kulo nyaka wesikolo ukuqinisekisa ukuba amaziko emfundo “akhuseleke ngokungaqhelekanga.”
Ngokuka-De Blasio, i igunya lokugonya yeyona ndlela ingcono yokuqinisekisa ukuba izikolo “zikhuseleke ngokungaqhelekanga” ngokubonelela ngento echazwe yiNgqonyela yeZikolo uMeisha Ross Porter “njengomnye umaleko wokhuseleko” wabantwana nabasebenzi.
Ngaphandle kokubhengeza ukuba ootitshala baya kunyanzelwa ukuba bafumane isitofu sokugonya, usodolophu we-NYC khange achaze ukuba yeyiphi isohlwayo esiya kunikwa abo bangavumiyo ukufumana ijab. Ootitshala abaphule umthetho wangaphambili babesemngciphekweni wokumiswa okungahlawulwanga.
UMongameli we-United Federation of Teachers uMichael Mulgrew uphendule kwisigunyaziso esitsha sogonyo ngokwamkela isidingo sokugcina "abantwana bekhuselekile kwaye izikolo zivulekile," kodwa watsho ukuba ngaphandle kwezonyango kufuneka zibekhona kwaye babiza u-de Blasio ukuba asebenze nemibutho yabasebenzi ukusombulula nayiphi na inkxalabo.
The City New York Igunya lokugonya le-COVID-19 lilandela umgaqo-nkqubo ofanayo omiselwe yiRhuluneli yaseNew York ephumayo u-Andrew Cuomo ngoJulayi, owabhengeza ukuba bonke abasebenzi bezempilo abaphambili kwizibhedlele ezilawulwa ngurhulumente kuyakufuneka bafumane i-jab ngoSuku lwaBasebenzi, ngaphandle kovavanyo olunikiweyo.
Isigqibo sikaCuomo sigubungele abasebenzi bakarhulumente abali-130,000, nabo bachaphazelekayo kulindeleke ukuba bafumane iyeza lokuthintela i-Pfizer okanye i-Moderna, okanye i-jab Johnson kunye ne-Johnson.